မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Visa အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Visa အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ…..	8
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Visa အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ…..
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 14, 2016 in Travel | 8 comments
(1) ဗီဇာမလိုသော နိုင်ငံများ (Visa not required)
(2) ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on arrival)
(3) ဗီဇာလျှောက်ထားရန်လိုသော နိုင်ငံများ (Visa required) များကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗီဇာမလိုသော (Visa not required) နိုင်ငံများ
1. ထိုင်း (Thailand) (14 Days)
2. လာအို (Laos) (14 Days)
3. ကမ္ဘောဒီးယား (Cambodia) (14 Days)
4. ဗီယက်နမ် (Vietnam) (14 Days)
5. ဘရုနိုင်း (Brunei) (14 Days)
6. ဖိလစ်ပိုင် (Philippine) (30 Days)
7. အင်ဒိုနီးရှား (Indonesia) (30 Days)
8. မောလ်ဒိုက်ဗ် (Maldives) (30 Days)
9. Dominica (21 Days)
10. Saint Vincent and the Grenadines (1 Month)
11. Micronesia (30 Days)
12. Ecuador (90 Days)
13. Haiti (90 Days)
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa On Arrival) လျှောက်ထားနိုင်သော နိုင်ငံများ
1. Madagascar (90 Days)
2. Mauritania (60 Days)
3. Mauritius (14 Days)
4. Mozambique (30 Days)
5. Nepal (နီပေါ) (90 Days)
7. Sri Lanka (သီရိလင်္ကာ)
8. Tanzania (3 Months)
9. Timor-Leste (အရှေ့တီမော) (30 Days)
10. Togo (7 Days)
11. Tuvalu (1 Month)
12. Uganda (3 Months)
13. Zambia (Up to 90 Days)
14. Bolivia (90 Days)
18. Guinea-Bissau (90 Days)
19. Iran (15 Days)
20. Armenia (120 Days)
21. Kuwait (3 Months)
22. Seychelles (1 Months)
ဗီဇာလိုသော (Visa required) နိုင်ငံများ
1 အိန္ဒိယ (India) E-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
2 စင်ကာပူ (Singapore) E-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
3 Kenya E-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
4 Rwanda E-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
5 São Tomé and Príncipe E-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
6 တရုတ် (China)
7 ဟောင်ကောင် (Hong Kong)
8 ဂျပန် (Japan)
9 မလေးရှား (Malaysia)
19 Australia and territories
44 Côte d’Ivoire
49 Democratic Republic of the Congo
105 New Zealand and territories
108 North Korea
114 Papua New Guinea
120 Republic of the Congo
123 Saint Kitts and Nevis
124 Saint Lucia
126 San Marino
130 Sierra Leone
133 Solomon Islands
136 South Sudan
145 Trinidad and Tobago
150 United Arab Emirates
152 United States and territories
အမှတ် (၁၈၀) ၊ မြေညီထပ် ၊ရန်ကင်း ဈေးကွေ့အနီး၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
??လူကြီးမင်းများ အတွက် လေယာဉ် လက်မှတ်များ
??ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ အပြင် လူကြီးမင်းများ အတွက် စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်ထားသော ခရီးစဉ် ကို အဆင်ပြော ချော့မွေ့ရန် Packages များရေးဆွဲပေးသည်။
?? ဝန်ထမ်းများ အတွက် သီးသန့် ခရီးစဉ်များ
09 78 2220 681~5 , 09 544 277, 09 7878 111 22
alinsett says: .ကောင်းပါလေ့…
.ဖွေးဖွေးနဲ့… ညားပြီး..ဟန်းနီးမွှန်း ထွက်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်… ဆက်သွယ်လိုက်မယ် ဒေါ်သျှားသက်မာန်။
ဒါမယ့်… ဖူးခက်ကိုပဲ.. သွားချင်တာဆိုတော့.. ဗီဇာတော့ မလိုဘူးပေါ့..။
ဟိုတယ်တို့… လေယာဉ်လက်မှတ်တို့ပဲ.. စီစဉ်ပေးရမယ်..။ တရုတ်ပြည်က… မဟာတံတိုင်းကိုလည်း သွားချင်သေးတာဆိုတော့…
အဲ့အတွက် တီရုတ်သံရုံးမှာ ဗီဇာတော့… လျှောက်ပေးနော့..။
တရုတ်သံရုံးက ဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့ တီရုတ်မမလေး သုံးယောက်က အားကြီး ရစ်တာပဲ…
.တခြားမှာ သုံးလို့ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေလည်း..တီရုတ်သံရုံးက…သုံးမရဘူးဆိုပြီး..ပြန်လဲခိုင်းတယ်။
တီရုတ်သံရုံးသွားရင်…ဒေါ်လာ အသစ်ကျပ်ချွတ်တွေသာ ယူသွား သပ်လား..
အောင် မိုးသူ says: ခရီးကတော့ထွက်ချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အလုပ်မလုပ်ဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးပတ်ချင်တာ ဟီးးး
CharTooLan says: ဆုတောင်းလေ အပေါ်က၂ယောက် :P
kai says: “ကဲ.. တိုင်ပေးမယ်.. လိုက်ဆို..။”
နိဗ္ဗာန်ကိုပေးပါ..။ သမာဓိကိုပေးပါ..။ ငွေတွေပေးပါ..။ ရွှေတွေပေးပါ…။ ဗီဇာတွေပေးပါ..။ ပါတ်စ်ပို့တွေပေးပါ..။
“ပြီးပြီလား.. ငါ့ထိုင်ကန်တော့ကြ..။ အဲ.. အဲ.. ဆက်ဆို..။ ”
ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ ကန်တော့ပါ၏အရှင်ဘုရား..။
“ဟင်.. သူများတွေနဲ့တူနေတယ်.. ဒီလိုလုပ်..။”
ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ ကန်တော့ပါ၏အရှင်သူမြတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး..။
“၀ူး… မောထှာ.. ” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အိမ်း
အူးစည် says: ဂျပန် ဗီဇာမလိုတော့ဘူး ကြားတယ်…
အားရင် ရွာသူားတွေ ဆာကေးလာသောက်လှည့်ကျ..
ဦးကြောင်ကြီး says: သျှားကို ခြစ်တယ်.. သျှားနဲ့ တူတူ ခွီးထွက်ခြင်တယ်၊ ဗီဇာလျောက်ထားပေးမား
Lay Pai says: Good!!!